Ezezindlu | Ezezimali
La izindlu Ngomnye wemicimbi ebaluleke kakhulu kuqoqosho kubomi bommi oqhelekileyo. Thenga ikhaya okanye ukurenta sisigqibo esibalulekileyo kwaye ke kuya kufuneka ukuba ube usesikhathini nayo yonke into eyenzekayo kwi candelo lezindlu Kwinqanaba likazwelonke nakwamanye amazwe.
Fumanisa yonke into oyifunayo malunga nemali mboleko, amaxabiso endlu, i-Euribor, ii-apreyizali, iirhafu, imigaqo-nkqubo, amaqamza kunye nezinye izihloko ezininzi ezinomdla ezichaphazela wena mihla le.
Yintoni irenti enenketho yokuthenga, inomdla okanye hayi?
por Encarni Arcoya yenzayo Iiveki ze2 .
Asinguye wonke umntu onokufikelela kwizindlu. Abantu abaninzi, mhlawumbi ngenxa yokuba abanayo imali ebandakanyekayo ekuthengeni ...
Izixeko ezishibhile eSpain
por Encarni Arcoya yenzayo Iinyanga ze4 .
ISpain lelinye lamazwe apho sinokufumana iindidi ezininzi. Isixeko ngasinye sine…
Indlela yokwazi i-cadastral reference
por Encarni Arcoya yenzayo Iinyanga ze7 .
Enye yezona zinto zibalulekileyo ezinyanzelekileyo kunye nezichongi ezisemthethweni ze-real estate yireferensi ye-cadastral. Ingxaki nantsi...
por Encarni Arcoya yenzayo Iinyanga ze12 .
Ixabiso le-cadastral lelinye lamagama esiwathanda kakhulu. Kodwa ezona sizithiye kakhulu. Oku…
Yintoni i-cadastre kunye nesalathiso se-cadastral
por Encarni Arcoya yenzayo 1 ngonyaka .
Ezimbini zeekhonsepthi onomdla wokwazi nzulu malunga nokuthengiswa kwezindlu yi-cadastre kunye nesalathiso ...
Ngaba indawo ingaguqulwa ibe likhaya?
Kungenzeka ukuba, ngamanye amaxesha, ufumanise ukuba ilungu losapho, umhlobo okanye umntu omaziyo unendlu "ekhethekileyo"….
Ukuphupha ukuba nendlu yinto exhaphake kakhulu, hayi phakathi kwezithandani kuphela, kodwa naphakathi ...
Yintoni ubunini obungenanto
por Encarni Arcoya yenzayo 2 iminyaka .
Kukho amaxesha apho iikhonsepthi zingacacanga kwaye singazimamela kodwa singayiqondi kakuhle into ...
Yintoni elindelwe kwintengiso yezindlu eSpain ngo-2020
Akukho nyaka uyafana nomnye, kwaye izinto zibonakala ngathi zihambile kwintengiso yezindlu. OKANYE…
Umsebenzi wecandelo learhente yokuthengiswa kwezindlu ngo-2019 ngokungathandabuzekiyo iya kuphawulwa kukuqhubeka kobambiso ...
Kunconywe kwaye kuyasebenza inzala yemali-mboleko eSpain
por USusana Maria Urbano Mateos yenzayo 4 iminyaka .
Ubambiso yimali mboleko eqinisekiswe lixabiso lepropathi, oko kuthetha ukuba iziko lemali ...